Ahoana no famolavolana anao? Amin'ny tanana sa amin'ny masinina? | Famoronana an-tserasera
fomba fomba analog na digital, ity dia iray amin'ireo fanontaniana izay matetika koa tonga ao an-tsain'ny mpamorona sary.
Ny mpamorona dia azo raisina ho mahatoky amin'ny natiora, tiany ny manohitra ny voam-bary na aleon'izy ireo mirona amin'ny lamaody ho avy. Na inona izany na inona, ny marina dia olona itodihan'izy ireo tiany na tia mamorona fotsiny ary ankoatr'izay, ho azy ireo ny fisainana dia zavatra izay tsy tokony misy fetra.
Ho an'ny mpamorona ankehitriny, izay azontsika antsoina koa mpamorona teratany, mety ho miharihary ny valiny. Ka mety izy ireo dia nitombo manokana sy matihanina, teo amin'ny solosaina, ny fitaovana finday ary ny tontolo virtoaly izay ahitana ny karazan-tambajotra sy ny karazana haino aman-jery rehetra.
Ary ho an'ireo izay te-hialoha antsika, ireo izay afaka nampiofana sy namolavola ny tontolo analog ary asa-tanana, ny fanafihan'ny pixel dia nanjary fanozonana ho lasa a fitaovana tena ilaina. Amin'izao fotoana izao dia misy aza ny kitapo fototra ahafahana misafidy paleta miloko tsy mila fahitana Pantone isan-karazany eo amin'ny fiainantsika ary izany koa dia mety hitranga amin'ny sehatra hafa, toa azo antsoina hoe mpamorona daholo na azonao atao mandiniha manam-pahaizana momba izanyRaha ny fahalalana tsotra ny fomba fampiasana rindrambaiko araka ny tokony ho izy dia angamba mety kokoa ny manontany tena amin'ny fomba famolavolana na ny fomba tiantsika hamolavola, satria na eo aza ny zava-drehetra dia tsy mazava loatra ny valiny, fa ny mifanohitra amin'izay no izy. .
Ho an'ny maro dia maneho ny endrika mpisolo toerana ny atao hoe manao zavatra amin'ny tanana, angamba famenony ary izany dia ny nomerika dia mitovy dika amin'ny ankehitriny sy ny analog amin'ny taloha.
Azontsika atao ny mieritreritra fa misy valiny na hevitra amin'ny karazana tsiro rehetra, na ho an'ny hafa aza, mety ho ny solosaina no famenon-tsakafo, ka mety ahenao ny lesoka, ka hialana amin'izay fantatra amin'ny anarana hoe gaga. Na izany aza, mandritra ny fotoana kelikely, dia toa manaparitaka izay mihoatra ny mitovy isika, amin'izay mety ho deja-vu mandrakizay.
Logo izay mitovy amin'ny logo hafa, doka misy sary mitahiry mitovy amin'ny sary, miaraka amin'ny fanovana ny kopia, Web, sora-baventy, lahatahiry, ankoatry ny maro hafa, izay tsy dia azon'ny olona firy ovay ny anaran'ny orinasa. Amin'izany fomba izany no ahafahantsika manohy izay hita amin'ny endrika ivelany fa manala baraka ilay fantatra amin'ny hoe famolavolana nomerika.
Ny fanontaniana mety tonga ao an-tsainao dia hoe inona no nanjo ireo volavola vita amin'ny taratasy? Ohatra iray azontsika raisina, fa ny fanovana nangatahan'ny mpanjifa farany dia tsy voavaha tamin'ny tsindry fotsiny, fa tamin'ny zava-misy mila mamerina ny asa hatramin'ny voalohany. Ity dia mety ho lasa fitohizan'ny hetsika tany am-boalohany, mazava ho azy, amin'ny fiheverana fa tsy manana ny sanda ampiana an'ny voalohany izy ireo, ka mandany fotoana bebe kokoa ary mankaleo.
Azontsika atao ny manome toky fa ny mpamorona tian'izy ireo ary be zotom-po amin'ny famoronana mampiasa izay rehetra azony atao, manomboka amin'ny pensilihazo teo aloha ka hatramin'izay fantatsika ankehitriny hoe solosaina, tsy lazaina intsony izay rehetra azon'izy ireo ampiasaina hanatanterahana hevitra. Noho io antony io dia misy ny fandraisana andraikitra toy ny Andriamatoa mahagaga Izy ireo dia manaitra na angamba toy ny asan'ny mpamorona Julien Vallée, izay tsy voamariky ny mason'ireo mpamorona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Ahoana no famolavolana anao? Amin'ny tanana sa amin'ny masinina?
Isaac rasqui dia hoy izy:
Miaraka amin'i Microsoft Paint xD
Valiny tamin'i Isaac Rasqui